प्रचण्डमाथि ‘विद्रोही’ नेताको फायर : जो मन्त्री भएसँगै ओलीभन्दा बढी आक्रामक बने ! | Samajik Khabar
Home राजनीति प्रचण्डमाथि ‘विद्रोही’ नेताको फायर : जो मन्त्री भएसँगै ओलीभन्दा बढी आक्रामक बने...
प्रचण्डमाथि ‘विद्रोही’ नेताको फायर : जो मन्त्री भएसँगै ओलीभन्दा बढी आक्रामक बने !
काठमाडौँ । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेसँगै मुलुकको राजनीति दुई धारमा विभाजित छ ।
एउटा समूहले संसद भङ्ग र निर्वाचन घोषणा ठीक भनिरहेको छ भने बहुसङ्ख्यक राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायी र विभिन्न पेसागत सङ्घ सङ्गठन ओली कदमको विपक्षमा उत्रिएका छन् ।
कोरोनाले हैरान बनेका जनताले सामान्य औषधि उपचार नपाइरहेका बेला संसद् भङ्ग गर्ने कदमको समर्थन र विरोधमा देशैभर सभा सम्मेलन गरेर शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी नै चलेको छ ।
यो ठीक त्यो बेठीक या ओली ठीक प्रचण्ड बेठीक भन्ने भ्रम छर्ने काममा पुस ४ सम्म एउटै पार्टीमा रहेका नेकपाकै नेताहरु अग्रपङ्क्तिमा छन् । उनीहरु एकअर्को पक्षमाथि गालीका वर्षा नै खन्याइरहेका छन् । मानौँ गालीको वर्षाबाटै आफू बलशाली र आफ्नो जित सुनिश्चित हुन्छ भनेजसरी व्यक्ति केन्द्रित आरोप प्रत्यारोपको बाढी चलाउने प्रतिस्पर्धा हेर्दा र सुन्दा लाग्छ उनीहरुमा सामान्य राजनीतिक संस्कार नै छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकाले उनीहरुबीच यस्ता आरोप प्रत्यारोप चल्नुलाई केही हदसम्म सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ । किनभने ओली नेकपा एमाले र प्रचण्ड माओवादी राजनीतिबाट उदाएका हुन् । तर यी दुवै पार्टी एकता हुँदै बनेको नेकपा र एकता नसकिँदै विभाजन भएपछि नेकपाको एउटा पक्ष ओलीसँग र अर्को पक्ष प्रचण्ड–माधव नेपाल खेमामा विभाजित छन् । ओली र प्रचण्ड दुवै पक्षमा पूर्व समूहका नेता कार्यकर्ता बाँडिएका छन् ।
ओलीको सिफारिसमा संसद् भङ्ग भएपछि पूर्व माओवादीतर्फका ५ र पूर्व एमालेतर्फका २ जना मन्त्रीले राजीनामा गरे । आफ्ना सहकर्मीहरुले राजीनामा गरे पनि पूर्व माओवादीतर्फका रामबहादुर थापा र लेखराज भट्टले भने ओलीलाई साथ दिँदै ओली मन्त्रिपरिषद्मा बसिरहे । त्यसलगत्तै ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे । जसमा पूर्वमाओवादीका केही नेतालाई मन्त्री बनाउँदै आफ्नो कित्तामा उभ्याए ।
प्रचण्डकै नेतृत्वमा समाजवादका लागि जनयुद्ध लडेका ती नेताहरुलाई मन्त्री पद पाएपछि प्रचण्डलाई गाली गर्न भ्याइनभ्याई भएको छ । कतिसम्म भने ओलीले उनीहरुलाई गाली गर्नकै लागि नियुक्ति दिएका हुन् । ओलीले संसद् भङ्ग गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्नुअघिसम्म सार्वजनिक कार्यक्रममा हत्तपत्त नजाने र गए पनि अत्यन्त कम बोल्ने गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा बादल पछिल्लो समय दैनिक सार्वजनिक कार्यक्रममा जाने र भाषण ठोक्नमै व्यस्त छन् ।
अर्का उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट पनि थापाकै पदचाप पछ्याइरहेका छन् । हिजोसम्म प्रचण्डको आडमा राजनीति गरेका थापा र भट्ट अहिले सबैभन्दा बढी प्रचण्डकै आलोचनामा उत्रिएका छन् । थापा र भट्टसँगै ऊर्जा मन्त्री भएका टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा र सहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भन्दा पनि चर्को स्वरमा प्रचण्डको विरोध गरिरहेका छन् ।
‘बादल’को अकाट्य बोली
नेकपामा अत्यन्त कम बोल्ने नेतामा पर्छन् रामबहादुर थापा ‘बादल’ । ओली नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्रीसमेत रहेका बादल नेकपाको विवादमा पनि लामो समय मौन नै रहे ।
केही समयको मौनतापछि बादल अन्ततः ओली कित्तामा खुले । ओली कित्तामा खुलेलगत्तै बादलका अभिव्यक्ति गृहमन्त्रालय र शान्ति सुरक्षा कयम गर्नेभन्दा पनि प्रचण्ड–माधव नेपालको आलोचनामा आफ्ना अभिव्यक्ति र समय खर्चन थाले । यतिसम्म कि बादलको बेली ओलीको भन्दा पनि चर्को हुन थालेको छ । शनिबार मात्रै ओली पक्षको नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री बादलले प्रतिगामी तत्त्वले नेकपा विभाजन गरेको विषय अकाट्य तथ्य भएको दाबी गरे ।
‘प्रतिगामी तत्त्वहरुले अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यस्तो तत्त्वले आफ्नो गुमेको सत्तालाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर रणनीति बनाइरहेको छ’, बादलको भनाइ छ । संसद् विघटन अग्रगामी कदम भनेर व्याख्या गर्ने बादलले ‘नयाँ निवार्चबाट मात्र विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न सकिने’, धारणासमेत राखे । बादलको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ प्रचण्डभन्दा ओली सयौँ गुणा अग्रगामी हुन् र उनले मुलुक धानेका छन् । उनले मात्रै संविधानको कार्यान्वयन पनि गरेका छन् । अरू सबैले संविधानको पालना गरेका छैनन् । सुन्दै पत्यार नलाग्ने बादलको दाबी छ– पुरानो संसदको औचित्य सकियो । नयाँ संसद् स्थापना अहिलेको आवश्यकता हो । ५ वर्षे प्रतिनिधि सभाको औचित्य कसरी सकियो ? कसका कारण सकियो ? भन्नेमा भने बादल मौन छन् । किनभने त्यसको दोष सबै ओलीमा जाने भएकाले उनी त्यसतर्फ बोल्न चाहँदैनन् ।
भट्टको त्यो अभिव्यक्ति
पूर्व माओवादी खेमाबाटै उद्योगमन्त्री बनेका हुन् लेखराज भट्ट । यी भट्ट पनि अहिले ओलीभन्दा चर्को स्वरमा संसद् असंवैधानिक र आलोकतान्त्रिक भनिएको संसद् विघटनलाई ओलीको महान कामको संज्ञा दिइरहेका छन् । भट्टले त आफ्ना पूर्वकमान्डर प्रचण्डप्रति कटाक्ष गर्दै केपी ओलीको मृत्युमा प्रचण्डले आफ्नो भविष्य देख्ने भूल गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । कोटेश्वरस्थित गौरीशङ्कर पार्टी प्यालेसमा ओली पक्षधर नेकपा रामेछाप–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको भेलालाई सम्बोधन गर्दै भट्टले प्रचण्डमा पदको आशक्ति चुलिएपछि माधव नेपालको कुण्ठालाई क्यास गरेर ओलीमाथि अराजनीतिक आक्रमण गरेको आरोप लगाउन भ्याए ।
भट्टले भनेका छन्, ‘केपी ओली मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर फर्किनुहुन्न भन्ने रहेछ । त्यसपछि मात्र उहाँले (प्रचण्ड)ले चलखेल थाल्नुभयो । केपी ओलीको मृत्युमा आफ्नो जीवन देख्ने भूल कमरेड प्रचण्डले गर्नुभयो ।’
त्यति मात्रै होइन, भट्टले प्रचण्ड निर्माणको नभई ध्वंशको नेता भएको भन्दै शान्ति प्रक्रियामै आइसकेपछि प्रचण्डले १० वटा सरकार गिराएको आरोप लगाए । भट्टले प्रचण्ड र माधव नेपाल मात्रै होइन, सभामुख अग्नि सापकोटालाई पनि कीर्ते गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
प्रभु साह जसले बोली फेरे
ओली सरकारमा सहरी विकासमन्त्री छन् प्रभु साह । रौतहटका शाह ‘प्रचण्ड’लाई जनतामाथि विश्वास नै नरहेको बताउँछन् । महोत्तरीको जलेश्वरमा शनिबार आयोजित नेकपा जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलामा मन्त्री साहले प्रचण्डले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण संसद् विघटन गराउने अवस्था पैदा गरेको दलिल पेस गरे । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई महाधिवेशनमार्फत पार्टीको अध्यक्ष तथा जनतामार्फत नै देशको प्रधानमन्त्री चुन्न पटक–पटक आग्रह गर्दा नमानेकाले संसद् विघटन गर्नुपरेको ओलीको शैलीमा जिकिर गरे । साह तिनै हुन्, जो विगतमा पद नपाउँदा ओलीको चर्को आलोचना गरेका थिए । यस्तै प्रदेश नम्बर २ मा आफूलाई स्वघोषित नेता दाबी गर्ने साह पार्टी एकता हुँदा अध्यक्षमै खुम्चिएका थिए । त्यति मात्रै अघिल्लो पटक ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफू नपरेपछि ओलीले करोडौँ रकम लिएर अरूलाई मन्त्री बनाएको आरोप लगाएका थिए । तर आज उनै साह एक थान मन्त्री पाएपछि ओलीको भक्तिगान र प्रचण्ड नेपालको उछितो काढ्न बालुवाटारबाट परिचालित भएका छन् ।
मणि थापाको ‘विचलन’
नेकपाका सीमित वैचारिक नेताहरुमध्येमा पर्छन् मणि थापा । माओवादी जनयुद्धलाई बीचैमा छोडेका थापा पछि शान्ति प्रक्रियापछि प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीमा पुनः जोडिएका हुन् । प्युठानका थापा वैद्य माओवादीतिर समेत केही समय बरालिए । पछि पुनः प्रचण्डसँगै आएका थापा तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण हुँदा स्थायी समिति सदस्य बने ।
संसद् विघटनपछि खानेपानी मन्त्री बनेका थापाले मन्त्री पदको शपथ खाएलगत्तै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालमा विचलन आएको बताए । केही दिनपहिला काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नं ७ मा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा उनले दुई नेतामा विचलन आउँदा पार्टी अप्ठ्यारोमा पुगेको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढेका बेला पार्टीभित्रबाटै बेइमानी सुरु भएको उनको भनाइ छ । प्रायः कम्युनिस्ट संस्कृतिमा विचलन आएको बताउँदै आएका मणि पछिल्लो पटक आफैमा आएको विचलनको भने पत्तै पाएनन् ।
एमसीसी नभए खत्तमा हुन्छ : रायमाझी
ओली सरकरका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री हुन् टोपबहादुर रायमाझी । रायमाझी तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा हुँदा डा. बाबुराम भट्टराई निकट मानिन्थे । भट्टराईले माओवादी छोडे पनि रायमाझी प्रचण्डसँगै रहे । पछिल्लो समय नेकपा विवादमा मध्यस्तकर्ताको रूपमा उभिएको दाबी गर्ने रायमाझी अन्ततः मन्त्री पदका लागि ओली कित्तामा उभिन पुगे । ओली कित्तामा लागेपछि र मन्त्री बनेपछि रायमाझीको दैनिकी प्रचण्ड–नेपालहरुलाई गाली गर्दैमा वितेको छ । मन्त्री पदको पदभार ग्रहण गरेकै दिन रायमाझीले विवादिन मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झैता नेपालको पक्षमा रहेको भन्दै लागू गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए ।
‘एमसीसी नै अपराध हो, सैन्य आक्रमण हुन्छ भनेर चलाइएका भ्रममा विश्वास नगर्न म आग्रह गर्छु’, पदभार ग्रहणपछि रायमाझिले भनेका थिए । जबकि नेकपामा एमसीसीबारे लामो समयदेखि चर्को विवाद हुँदै आएको छ र ‘एमसीसी हुबहु लागू गर्नुपर्छ भन्ने त होइन तर यदि त्यो लागू गर्न नसक्ने हो, ट्रान्समिसन लाइन निर्माण नगर्ने हो भने खतम हुनेवाला छ,’ रायमाझीको भनाइ छ ।
Previous article‘कसैको मुख्यमन्त्री हुने रहरलाई भित्ते मुख्यमन्त्रीको रूपमा सीमित पार्छौं’
Next articleनक्कली पिसिआर रिपोर्ट बोकेर विदेश जान लागेका ७ जना पक्राउ